Qalabka 737 1 sano 6 bilood ka hor #1302
Fursad kasta oo aad ku dari kartid labalabaynta kanaalka / sharkling (kan sare iyo hoosta hoose) ee xirmada 737 ama ka samee 737 max. Runtii miyuu khibrad u yeelanayaa qulqul-celin badan
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Jervan, Sea7212
Qalabka 737 1 sano 6 bilood ka hor #1320
Dood-wadaag ah in aan la lahaa iFly oo ku saabsan wax ka baddalidda B737 NG tan, waxay ku dhufteen xaqiiqda ah in 2020 ay qorsheynayaan inay soo bandhigaan B737 MAX.
Qalabka 737 1 sano 6 bilood ka hor #1322
miyuu yahay lacag bixinta?
Qalabka 737 1 sano 6 bilood ka hor #1323
Haa iFly waa lacag bixinta, laakiin waa u qalantaa. Iyada oo uu ahaa Navaal Aviator, waxaan u duulay V-3 iyo C-9 Variants iyo waxaan dhihi doonaa bixinta iFly bixinta waxay bixisaa khibradda ugu saxsan ee bilawga qaboobaha iyo sifooyinka diyaaradda. Wanaag ku filan lacagta si aad u hesho khibrad dhab ah.
Qalabka 737 1 sano 5 bilood ka hor #1347
haddii aad u maleyso in iFly ay wanaagsan tahay ... waxaad u baahan tahay inaad tijaabiso PMDG
Waxay bixiyeen maaha mid raqiis ah ... laakiin qiyaastii qiime kasta! 737, 747 iyo 777 oo keliya ayaan duuli doonaa PMDG
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.245